Series Promo Archives - Page2of2- YTV
Home » Series Promo » Page 2
ကမ္ဘာပျက်ကြီးပေါ်က ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အလင်းမြို့တော် ကို ရှာဖွေကြသူများ The 100 Series ရဲ့ အစောပိုင်း Season တွေမှာတော့ ကမ္ဘာကြီးဆီကိုစေလွှတ်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လူငယ်အယောက် တစ်ရာက ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့အန္တရာယ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရင်း မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်…. […]
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်းဖော်ကျူးမယ်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိတွေလည်းဖော်ပြမယ်၊ ချစ်ခင်ရသူတွေကို ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကိုလည်း ပြသပေးမယ့် ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ကြည့်ရရင် မကောင်းဘူးလား….? ဒီလို ရသစုံပြီး ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြည့်ရမယ့် ရေခဲနန်းတော် စီးချင်းတိုက်ပွဲ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို YTV Channel […]